Ukulungisa - ke ezibizayo, kodwa, ngeshwa, hhayi kakhulu isikhathi eside. Kodwa bobabili bafuna Cover igcinwe fresh isikhathi eside ngangokunokwenzeka. izinto eziningi zanamuhla kungaba ukuziqhayisa izakhiwo ezinjalo. Khona-ke ukophula elidala, amathuluzi efakazelwe isikhathi. Ngokwesibonelo, lo powder "itshe eliyigugu." enamathela okunjalo udume yayo izakhiwo bafake nemithi, ukumelana amathonya kwemvelo.
Kulesi sihloko sizoxoxa izakhiwo ngendlela emangalisayo lomlayezo futhi ufunde indlela apheke "itshe eliyigugu," powder ekhaya.
Uyini "itshe eliyigugu,"
It iyithuluzi elihle kunalokho kufanele ngokuthi "alyuminka". Phela, naphezu igama fancy, ke ayinazo esiliva lehla. I powder kwaba ngokuphelele sakhiwa particulate aluminium futhi kuchithwa impahla. Ngamafuphi nje, lo powder "itshe eliyigugu," - is nepepper in aluminium uthuli. Yingakho ukuthi unesikhathi umthunzi enjalo amahle esiliva.
Ukubunjwa Umbala we "itshe eliyigugu," (powder) buhlanjululwe ku ukuvumelana oyifunayo esebenzisa ekhethekile, okuyinto sixoxa ngezansi. Ingxube ngaleyo ndlela etholwe eyayisetshenziswa kabanzi for imibala ezihlukahlukene evele.
Uma ungafuni lokudlela ezungeze, ungakwazi ukuthenga upende ngomumo eyenziwe futhi ulisebenzise nezinye izinjongo esitolo noma emakethe. Nokho, kulesi simo, ungathatha ingozi ukubanjwa kubhajethi gimmicks abakhiqizi. Enjalo okungase kube osomabhizinisi musa ayakuzonda wengeze ezihlukahlukene izithasiselo upende, ukunciphisa izindleko zawo, kodwa zibulale izinga material.
Njengoba lo powder "itshe eliyigugu," yenziwe yonke aluminiyamu luthuli, umehluko anakho into eyodwa kuphela - ingxenyenamba. Ezimakethe kunezindlela ezimbili "zezikhala silverfish":
I-PAP-1 - aluminium powder ingxenyenamba emikhulu;
PAA-2 kuyinto izinhlayiya emihle ngaphezulu metal.
Umehluko amanga kuphela ubukhulu bale ingxenyenamba, zonke ezinye izakhiwo ayafana yini.
Umehluko kakade isiqedile "itshe eliyigugu," (upende). I powder buhlanjululwe ukuvenisha noma uwoyela linseed. Kuye ngalokho sisetshenziswa, upende siphelile ungaba izakhiwo ezahlukene. Ngokwesibonelo, ngesikhathi dilution ka ukushisa ukumelana lacquer ingxube ongakwazi ukumelana namazinga okubanda afinyelela ku-400? C. udayi okunjalo ovunyelwe ukusebenzisa Ukushisa radiators, ezinjinini zezimoto, ebusweni engaphakathi fireplaces amakhabethe nokunye ngomuthi okuyinto bavezwa okushisa aphakeme.
Uma mhlaba akudingekile ukulungiswa upende kuyinto ibitume ngempela efanelekayo ukuvenisha BT-577.
Lapho babephuza "esiliva uketshezi"
Powder "itshe eliyigugu," - material kunalokho ethandwa futhi sisetshenziswa kabanzi kokubili ekhaya emsebenzini amasayithi. upende Isiliva esetshenziselwa Umdwebo:
Izingxenye ukukhiqizwa izindawo;
izinhlelo kurediyetha bafudumale wesifunda panel;
izingxenye imikhumbi, iziteshi ezintantayo kanye echwebeni, amatheku nezakhiwo kwamanzi;
amapayipi kanye izakhi metallic ezihlukahlukene;
izingxenye izinhlelo okumele bavikelekile okweqile;
eziqoshiwe, izikhumbuzo, gravestones ezicijile, eziyisikhumbuzo kanye nezinye izinto.
Ukusetshenziswa kabanzi lo mkhiqizo upende ngenxa impahla yayo omuhle. Nazi ezinye izinzuzo zaleli upende:
basibekele ubuso, njengesikhumba sesibili amanga ungqimba flat futhi angabacwasi mncane;
"Silverfish" uzisibekele cishe zonke izinhlobo evele izinkuni, metal, izinto ezenziwe ngobumba, ukhonkolo, plastic kanye nokunye okufana nalokho;
esehlanganise ngokuphelele ngaphansi kwe-nokugqwala, awusebenzi izinhlayiya zeqhwa noma ikhasi off, uvalwe ukunamathela ebusweni;
Kuyinto ukumelana lokushisa eliphezulu;
lulodwa okungezona ezinobuthi futhi omiswe fast kakhulu;
iqhathaniswa nezinye izinto Umbala "itshe eliyigugu," has a lifetime omkhulu: iminyaka engu-3 ngaphansi kwamanzi, eminyakeni 6-7 ngaphandle iminyaka engaphezu kwengu-10 endlini;
ababethi esiliva umbala izinto ibukeke kahle yasekuqaleni futhi kudonsele ukunakekela.
Ngaphambi yokuzalanisa "isiliva" (powder) ngenxa yokudweba metal amakhabethe nokunye ngomuthi, asikhulume hhayi kuphela ngezinzuzo, kodwa futhi ukushiyeka le nto. Ziyakwazi ezimbalwa:
impuphu kuyinto ngempela kuqhume, ngakho kufanele uyigcine kude umlilo, izigubhu uvalwe waqiniswa. Futhi kuwufanele ngokugcina esiliva powder kude nezingane.
Isiliva upende akufanele zisetshenziswe phezu, ngaphambili zaveza ngamafutha, NBH noma upende alkyd, futhi nitroemalyu. Lapho usebenzisa i-"silverfish" phezu ezinjalo kungabonakala nasemkhakheni Bubbles. Upende awunamatheli noma ihamba.
Ngokuphambene ukukhangisa acrylic "silverfish" akukhona nje kuphela ukuthi zonke izakhiwo emangalisayo upende evamile, kodwa ikhumbule iminonjana nokugqwala kakade ngesikhathi staining.
Isixazululo aluminiyamu esiliva powder ayikwazi ukusetshenziswa olungele ukudaya izingxenye lashukumisa. Kusukela contact ka izingoma ezimbili zinc enamathela ngokushesha ubhujiswe. Nokho, uma isidingo Umdwebo lashukumisa likhulu kakhulu, alisibekele ambalwa zamatshe primer ekhethekile.
Ulungiselela 'silverfish "
Ngakho, indlela ukuzalela "silverfish" powder for Umdwebo? Ngaphambi kokuqala umsebenzi, udinga stock up on konke okudingayo. Uzodinga:
amagilavu, injoloba kanye amagogolo;
ukuxubha noma fafaza isibhamu;
umthamo yokuzalanisa (khumbula, ugeze khona ngeke isebenze);
ukupenda izacile "uMoya White" noma okuthile okunjalo;
linseed uwoyela noma ukuvenisha.
Uma kudingekile ukulungisa ezivamile, ukushisa upende ebucayi, lacquer kanye aluminium powder exutshwe endaweni isilinganiso 1: 3. Leyo ngenye ingxenye powder zaba ezintathu lacquer noma ukuvenisha. Uma ingxube okuholela kwaba obukhulu kakhulu futhi ukuvumelana oyifunayo bungatholakala ngokungeza turpentine kancane, "kuphela" noma "umoya emhlophe". Ezimweni lapho ingxube okuholela sisetshenziswa usebenzisa ibhulashi upende noma roller, uketshezi kumele wanezela kancane. Ukuze usebenzise isibhamu spray, ingxube kufanele buhlanjululwe endaweni isilinganiso 1: 1.
Uma ufuna ukuthola upende ukushisa ukumelana, udinga ukuvenisha, okuyinto has izakhiwo ezinjalo. Alulaze ingxube kufanele kube ngale ndlela: izingcezu ezimbili aluminium powder kanye izingcezu ezinhlanu ukushisa ukumelana ukuvenisha. uwoyela linseed kulokhu akudingekile.
Manje kubalulekile ukuchaza kancane ku inqubo kuhlangana:
Ukuvenisha kudingeka uthele powder in izingxenye ezincane (hhayi noHezekeli);
ingxube etholwe ngaphandle izigaxa, kubalulekile ukuba ngokuqhubekayo ugovuze imizuzu okungenani 15-20;
kungcono ukusebenzisa mixer isakhiwo.
uma isixazululo ngomumo kuyoba obukhulu kakhulu ukufeza ukuvumelana oyifunayo kungenzeka esebenzisa toluene.
Isexwayiso! Ngoba yimuphi ukuvenisha kuyinto ngempela enobuthi futhi iphunga okubabayo, inqubo kuhlangana kumele kwenziwe endaweni kahle umoya, ukuvikela izinhlaka kwezimila ngomshini.
Indlela ukusebenzisa upende kahle
Ukuze inqubo staining kwase kufana nokuthi ngangokunokwenzeka, kubalulekile ukulungiselela ebusweni: bahlanza of nokugqwala, isikali, izintuli nokungcola. izingxenye Ngokhuni kumele sanded ngokucophelela wesula ngendwangu emanzi ukususa swarf. Uma ususa upende omdala akunakwenzeka, ebusweni kufanele sanded futhi wambozwa primer.
Kuye elamukelekile kungcono kakhulu ukusebenzisa upende e ezelekene, ngokuvamile ezimbili noma ezintathu kuphela. Udinga ukusebenza angabacwasi ngokushesha, njengoba ungqimba ezondile upende seyomile ngokushesha ngaphandle. Uma isikhathi esijana, "silverfish" ukuncipha ngakwesokunene, futhi kuyodingeka balahlwe.
Indlela ukuhlanza nxazonke
Manje ngoba sewuyazi ukuthi ezinye izakhiwo ezithakazelisayo we "itshe eliyigugu," (powder). Indlela ukuncibilikisa impahla, nawe kufanele baqonde. Kodwa akugcini lapho. Kaningi lapho esebenza esiliva inki amaconsi iwe kulawo evele lapho akufanele kube. Okufanele ukwenze kuleli cala? Indlela ukususa "isiliva" ngemva kwalo seyomile?
Uma buhlanjululwe powder ekhaya, ngoba ukususwa amaconsi engadingeki futhi drips udinga ukusebenzisa uketshezi olufanayo esasetshenziswa ekulungiseleleni ingxube.
Esimeni lapho ngomumo (izitolo) upende kanye kuphela yasetshenziselwa akwaziwa, kungenzeka ukuzama ukusebenzisa izindlela ezivamile owaziwa:
Sebenzisa ibala remover ketshezi nail zesifazane sula, ayiqukethe acetone. Ngemva kwesikhashana, kugeze off the upende ziyoncibilika ngamanzi plain.
Sabalalisa esinabantu esiliva indawo iyiphi amafutha zemifino. Linda imizuzu 10-15 basihlikihle kakhulu upende ezomile indwangu kanzima. Phinda inqubo izikhathi eziningana ukufeza umphumela oyifunayo.
Elizabeth Montgomery: Biography, Filmography, izithombe